Esi tinye paswọọdụ na WhatsApp: methodszọ 6 na-arụ ọrụ | Nzukọ Ekwentị
Etu esi etinye okwuntughe na WhatsApp
Daniel Terrasa | | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, WhatsApp
WhatsApp bụ ihe kasị eji ngwa ngwa ngwa ngwa ụwa. A na-edekọ ọtụtụ n'ime ndụ anyị n'ime ya, na mkparịta ụka anyị na otu nkata anyị. Ọtụtụ ozi nzuzo nke anyị chọrọ ichebe. Enwere ụzọ iji mee ya? Azịza ya bụ ee. Anyị na-akọwa esi etinye paswọọdụ na WhatsApp.
Ihe karịrị otu ijeri ndị na-arụ ọrụ kwa ọnwa bụ ihe kachasị mma nke ihe ịga nke ọma nke WhatsApp. Ngwa a na - emeziwanye ụbọchị ọhụrụ site na iji e ọhụrụ ohere na-adọrọ mmasị. Ka oge na-aga agbakwunyere nhọrọ kpochapụwo maka nkata, ọdịyo, olu na oku vidiyo iji kesaa akwụkwọ nke ụdị, GIF, ọnọdụ, wdg.
Ntuziaka doro anya na WhatsApp Web iji nweta ọtụtụ ihe na ya
Agbanyeghị, ruo mgbe ọ dịbeghị anya ọ nweghị ụzọ chekwaa ozi niile ahụ eji okwuntughe, PIN ma obu ihe ndi ozo. Nke a bụ ihe egwu doro anya nye ndị ọrụ, na-ahapụ ha n'enweghị nchebe pụọ na nnabata nke ndị ọrụ na-enweghị ikike. Naanị site n’inweta ekwentị anyị, onye ọ bụla nwere ọrụ iledo ma ọ bụ asịrị nwere ike ịgụ nkata anyị, lee foto anyị na vidio anyị, matakwa ndị anyị na ya na-akpakọrịta.
Ọ dabara nke ọma, taa anyị nwere ezigbo ihe ngwọta maka nsogbu a. Ọbụghị naanị site na ngwa ahụ n'onwe ya, kamakwa site na ihe ndị dị na mpụga nke ahụ na-enye ndị ọzọ zuru oke iji mejupụta oghere ndị a. Ndị a bụ ụfọdụ azịza nye ajụjụ banyere otu esi esetịpụ paswọọdụ na WhatsApp:
1 Nịm okwuntughe si ngwa ahụ n'onwe ya
1.1 Archive nke mkparịta ụka
1.2 Ihuenyo mkpọchi ọrụ
1.3 Nkwenye uzo abuo
2 Nịm paswọọdụ na mpụga ngwa
2.4 Mkpọchi Nchedo CM
3 Ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị jiri WhatsApp na kọmputa gị: mechie oge niile
Nịm okwuntughe si ngwa ahụ n'onwe ya
Na mmelite 2019, agbakwunyelarị nchebe ọzọ na mkparịta ụka WhatsApp nkeonwe. Dịka ọmụmaatụ, ọ gụnyere ọrụ ọhụrụ nke na-enye ndị ọrụ ohere ịgbakwunye PIN, mkpịsị aka ma ọ bụ mkpọchi njirimara ihu iji chebe ọdịnaya nke ngwa ahụ.
Eziokwu bụ na ọ bụla mmelite ọ bụla WhatsApp na-emeziwanye nke a na atụmatụ ndị ọzọ nke ngwa ahụ. N'oge ndị a, ndị a bụ nhọrọ ndị ọrụ nwere iji hụ na nzuzo nke kọntaktị ha na mkparịta ụka ha:
Archive nke mkparịta ụka
Nchegbu gbasara nzuzo nke chats WhatsApp anyị nwere ike ịbụ naanị ụfọdụ kọntaktị ma ọ bụ mkparịta ụka ụfọdụ. N'okwu a, enwere nhọrọ n'ime ngwa ahụ nke na-enyere anyị aka zoo ozi a nke ndị ọzọ na-ele anya na-enweghị ịbanye na okwuntughe.
Ebe nchekwa WhatsApp
Ọ bụghị usoro doro anya ma ọ bụ na-enweghị atụ ma ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ nkwenye zuru oke nke nzuzo, mana ọ nwere ike ịba uru dị ka ọkwa nchekwa mbụ. Nke a bụ otu ị ga - esi zoo ma ọ bụ kpoo mkparịta ụka WhatsApp. Ọ na-eje ozi iji zoo kọntaktị:
Na gam akporo: anyị na - ahọta mkparịta ụka ma ọ bụ mkparịta ụka anyị chọrọ izo ma jiri nhọrọ "Archive", nke gosipụtara na menu nwere akara ngosi n'ụdị folda. Iji weghachite mkparịta ụka ndị a mgbe emechara, anyị nwere ike ịga n'oge ọ bụla na folda "echekwara chats".
Na iOS / iPhone: nke mbụ anyị na-achọ mkparịta ụka anyị chọrọ izo. Megharị ya n'aka ekpe menu ga-apụta na nhọrọ "Archive". Mgbe ahọpụtara, a ga-echekwa ya na akpaghị aka, chekwaa na folda «Archived chats», mana ọ na - adịkwa mgbe niile iji nhọrọ «unarchive».
Ekwesiri ighota na ihe obula nhọrọ a kwesiri ibu eji naanị oge ụfọdụ. Ma ọ bụghị ya, iji ya mee ihe ize ndụ nke ibubata ohere nchekwa nke mobile, nke ga-emetụta ọrụ ya n'ụzọ ziri ezi.
Ihuenyo mkpọchi ọrụ
Ọrụ a bụ dị na iOS na ngwaọrụ gam akporo. A ghaghị ịrụ ọrụ ya na nhọrọ nhazi ngwa. Ọ bụ usoro dị mma iji gbochie ọdịnaya gị pụọ n'anya anya.
Iji rụọ ọrụ ọhụrụ, soro usoro ndị a:
Nke mbu, odi nkpa budata ụdị WhatsApp kachasị ọhụrụ site na Storelọ Ahịa ma ọ bụ Google Play. Nke a bụ mbipute 2.19.21.
Ozugbo ebudatara mmelite ahụ, ị ​​ga-emepe emepe Mbido menu, nke nhazi ya nwere ike ịdịgasị iche dabere na usoro ahụ.
Na menu, pịa nhọrọ "ụgwọ", ebe anyị ga-ahụ ndepụta nwere ọtụtụ nhọrọ. Onye na-ezo aka na nchekwa na nzuzo akara akara nke obere igodo.
N'ime menu ọhụrụ nke meghere n'okpuru, ị ga-ahọrọ nhọrọ ahụ "Nzuzo", nke ga - egosi anyị ọtụtụ nhọrọ dị maka nchekwa akaụntụ, dị ka ịzobe foto profaịlụ.
Nhọrọ nke anyị ga-ahọrọ bụ nke "Mkpọchi ihuenyo", nke na-enye anyị ohere ịhọrọ ọnọdụ mmeghe na oge ga-agabiga ka ọ rụọ ọrụ na akpaghị aka.
Ozugbo anyị mechara mkpọchi ihuenyo, anyị nwere ike mepee WhatsApp anyị na ID ID, Touch ID (abụọ a naanị na iOS), akara mkpịsị aka ma ọ bụ okwuntughe. Ihe anyị kpebiri na mbụ.
Nkwenye uzo abuo
Na nso nso a WhatsApp emejuputala ihe nkwenye abuo, Nhọrọ nhọrọ nke emebere iji nwekwuo nchebe nke akaụntụ ndị ọrụ, ma na gam akporo na iPhone.
Ozugbo enyere usoro nchebe a aka, onye ọrụ ga-enyocha nọmba ekwentị ha na WhatsApp site na paswọọdụ ọnụọgụ 6. Usoro nke abụọ nke nche nwere ozi nkwenye nke ga-abịa site na email.
Etu esi etinye paswọọdụ na WhatsApp n'ụzọ a? Nke a bụ ihe ekwesịrị ime:
Pịa bọtịnụ ahụ menu (akara ngosi 3-dot na akuku aka nri nke WhatsApp) ma họrọ nhọrọ "mwube".
Wee pịa "ụgwọ" ma họrọ nhọrọ "Nkwenye uzo abuo".
N'ikpeazụ pịa bọtịnụ ahụ "nwee" ma tinye okwuntughe nke ichoro. Optionally, a mgbake email address nwekwara ike banye n'ihi na akaụntụ gị.
A kọwara usoro a dum n'ụzọ doro anya na vidiyo na-esonụ:
Nịm paswọọdụ na mpụga ngwa
Tupu mmelite ngwa ndị a n'ihe gbasara nchekwa adị, ọtụtụ ndị ọrụ bidoro na mpụga ngwa n'ihi nsogbu nke otu esi edozi paswọọdụ na WhatsApp. Ọbụna taa enwere ọtụtụ ndị tụkwasịrị ha obi karịa ihe ọzọ n'ime usoro ahụ n'onwe ya, ọkachasị n'ihi na ha na-enye ụfọdụ Ọrụ ndị ọzọ. Ndị a bụ ndị a pụrụ ịtụkwasị obi karịsịa:
AppLock, iji kpuchido ohere maka ngwa niile nke ekwentị mkpanaaka anyị
Ngwa a agaghị abụ naanị ihe bara uru maka anyị iji kpuchido nkata anyị na WhatsApp, kamakwa kpuchido ohere inweta ngwa ọ bụla na ekwentị anyị.
N'ime usoro ntinye AppLock, anyị nwere ike ịhọrọ ngwa ndị anyị chọrọ iji paswọọdụ chedo ma họrọkwa nke dị iche maka nke ọ bụla n'ime ha. Ọ bụ naanị maka gam akporo.
Budata njikọ: Ngwa
ChatLock + na-enyere anyị aka ichedo WhatsApp anyị ma n'otu oge ahụ "chọpụta" ndị chọrọ ịmata ihe
con ChatLock +Na mgbakwunye na inwe ike igbochi ịnweta WhatsApp site na PIN, anyị ga-enwe ọrụ dị oke egwu ma na-atọ ụtọ: ịmara onye na-anwa ịnweta ozi nkata anyị na-enweghị ikike.
Olee otú nke a ga-esi kwe omume? Nke a bụ ihe dị ịtụnanya nke ChatLock +: ngwa ahụ jiri igwefoto n'ihu ekwentị jiri ezi uche na-agbachi nkịtị, na-ese onyinyo nke onye ahụ na-anwa ịkpọghe WhatsApp. Onye nledo "ga - achọ" n'aka uhie. Obi abụọ adịghị ya, nke a bụ nhọrọ sibylline nke usoro sistemụ WhatsApp anaghị enye.
Budata njikọ: ChatLock +
Maka ndị ọrụ iPhone, nke a bụ ezigbo njikwa okwuntughe nke na-enye anyị ohere ịchekwa ozi anyị n'enweghị nsogbu site na paswọọdụ nnabata. Otu paswọọdụ ịchịkwa ihe niile.
Na mgbakwunye na ịza ajụjụ banyere otu esi etinye paswọọdụ na WhatsApp, 1Password na-enye ndị ọrụ ya ohere ijikwa okwuntughe na ịnweta data maka logins, kaadị akwụmụgwọ, akwụkwọ, okwuntughe WiFi, ikikere ngwanrọ, wdg. Ihe niile edobere ma dịkwa nchebe.
N'ezie, n'adịghị ka ngwa ndị a, a na-akwụ ụgwọ a. Ọ na-enye ụdị nnwale ọnwụnwa 30 n'efu na mgbe ahụ ị ga-akwụ ụgwọ ego kwa ọnwa nke ihe dị ka euro abụọ abụọ (ọnụahịa ahụ ezighi ezi, ebe a na-agbakọ ya na dollar).
Budata njikọ: 1Password
Mkpọchi Nchedo CM
Mkpọchi Nchedo CM: nzuzo na nchebe nje
Valid maka gam akporo na iOS, Mkpọchi Nchedo CM A na-ewere ya dị ka otu n'ime ngwa kachasị mma nke ụdị ya. Nnukwu uru ya bụ na, karịrị inye usoro nchekwa na ngwaọrụ gị, ọ nwekwara antivirus na-arụ ọrụ.
Ozugbo awụnyere ngwa ahụ, anyị nwere ike ịtọ ntọala nchedo niile maka ozi, ọkwa, nbudata, wdg.
Budata njikọ: CM Secutity mkpọchi
Ndụmọdụ ma ọ bụrụ na ị jiri WhatsApp na kọmputa gị: mechie oge niile
N'ikpeazụ, ndụmọdụ ikpeazụ banyere nchekwa: Ọ bụrụ na anyị na-eji WhatsApp na kọmputa ma anyị anaghị ezube iji ya ọzọ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya mechie oge niile na anyị meghere. Ya mere, anyị ga-emechi ohere ọ bụla na-enwetaghị ikike na akaụntụ anyị site n'aka onye ọ bụla nwere ike ịnweta ekwentị anyị na-enweghị nkwenye anyị.
Etu esi emechi oge niile? Dị mfe: anyị na-enweta ngalaba WhatsApp Web na nhoro «Oge» Anyị ga-ehichapụ ndị niile anyị na-agaghị eji ọzọ. Ma mgbe enwere obi abụọ, kacha mma ihichapụ ha niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu esi etinye okwuntughe na WhatsApp
Etu esi ede ederede n'ime Microsoft Word
Etu ịtọ oge ma ọ bụ ngụda na Instagram